'Nightmare on Elm Street' Reboot သည်နောက်ဆုံးတွင်ဇာတ်ညွှန်းရေးသူဖြစ်လိမ့်မည် - iHorror
ပင်မစာမျက်နှာ ထိတ်လန့်ဖျော်ဖြေရေးသတင်း 'Nightmare on Elm Street' Reboot သည်နောက်ဆုံးတွင်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်
'Nightmare on Elm Street' Reboot သည်နောက်ဆုံးတွင်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်
by Waylon ဂျော်ဒန် ဒီဇင်ဘာလတွင် 26, 2018
ကရေးသား Waylon ဂျော်ဒန် ဒီဇင်ဘာလတွင် 26, 2018
David Leslie Johnson-McGoldrick သည်သူ၏အလုပ်များသောအချိန်ဇယားထဲမှမိနစ်အနည်းငယ်ကြာသည် Aquaman နယူးလိုင်း၏ rebooting ဖြစ်နိုင်ချေနှင့် ပတ်သတ်၍ နောက်ဆုံးသတင်းများကိုပရိသတ်များသိရှိစေရန်ယခုအပတ်တွင် Elm လမ်းပေါ်မှာအိပ်မက်ဆိုးတစ်ခု.
ဂျွန် ၀ မ်မသာပါ ၀ င်သောယခင်စာရေးခြင်းဆိုင်ရာခရက်ဒစ်များတွင်ဂျွန်ဆင် - မက်ဂ်ဒရစ်ခ်ရှိသည် Aquaman ဒါပေမယ့်လည်း မိဘမဲ့သား နှင့် 2, ကိုပြောသည် GameStop reboot လုပ်နေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမယ့်ဘာမှမတိုးတက်သေးဘူးဆိုတာပဲ။
တကယ်တော့သူသည်သူသည်လက်ရှိတွင်စာရေးခြင်းကိုအာရုံစိုက်သည်ဟုဇာတ်ညွှန်းရေးသူကဆိုသည် 3ဒါပေမယ့် အိပ်မက်ဆိုး reboot က New Line မှာရေးတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်တော့မှမဝေးပါဘူး။
ဒီဂိမ်းကို reboot လုပ်ဖို့နောက်ဆုံးကြိုးပမ်းမှုကတော့ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ Jackie Earle Haley ကိုသရုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကြယ်ပွင့်ရလဒ်တွေကသိပ်မများလှပါဘူး။ Haley ရဲ့ဖျော်ဖြေမှုကိုရုပ်ရှင်မအောင်မြင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကြောင့်ပြသခဲ့တယ်။
ပရိသတ်များအနေဖြင့်ထိုပြန်လည် reboot လုပ်ရန် hate-wagon ကိုအလျင်အမြန်အလျင်အမြန်ရောက်နေကြသော်လည်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုနှစ်သက်သောဂိမ်းကိုနှစ်သက်သောရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများနှင့်ပရိသတ်များကထိုဂိမ်းကိုမှန်ကန်သောလမ်းဖြင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာစေရန်စိတ်အားထက်သန်နေကြသည်။
တကယ်တော့မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း indie ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူများသည် bandwagon ကိုခုန်တက်ကာရုပ်ရှင်အသစ်ကိုကိုင်ဆောင်ရန်အခွင့်အလမ်းအတွက်သူတို့၏နာမည်များကို ဦး ထုပ်ထဲထည့်လိုက်သည်။
အထူးသ, ဖလော်ရီဒါ -based ဒါရိုက်တာ Domonic စမစ် အဆိုပြုချက်တစ်ခုမဟုတ်ပေမယ့်သုံး "နောက်တွဲယာဉ်" နဲ့အွန်လိုင်းပရိသတ်တွေ wowed အိပ်မက်ဆိုး: Elm လမ်းသို့ပြန်သွားသည်YouTube မှာသန်းနဲ့ချီတဲ့မြင်ကွင်းတွေသာမကပဲ franchise alum ရဲ့အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တယ်။
David Gordon Green ၏ ၂၀၁၈ အောင်မြင်မှုနှင့်အတူ ဟယ်လို ဒီရုပ်ရှင်ဟာစီးရီးကိုမူလရုပ်ရှင်ကားထဲပြန်ဝင်စေပြီး SpringHill Entertainment က reboot တစ်ခုအတွက်ပန်ကြားဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သတင်းနဲ့အတူ သောကြာနေ့ ၁၃ ရက်မှာအခြားကြိုးပမ်းမှုနိုင်ပါတယ် Elm လမ်းပေါ်မှာအိပ်မက်ဆိုးတစ်ခု တကယ်လမ်းပိုင်း၏အများကြီးဖြစ်လိမ့်မည်နည်း
ငါတို့ထင်သည်မဟုတ်။ ဂျွန်ဆင် - မက်ဂ်ဒရစ်ခ်ကကျွန်ုပ်တို့အားအချိန်ကာလသတ်မှတ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း၊ အထူးသဖြင့်ရောဘတ်အင်ဂလန်သည်သင်္ဘောပေါ်သို့ခုန်လျှင်၎င်းသည်စိတ် ၀ င်စားစရာပရိသတ်များသေချာပေါက်ရှိသည်။ အဆိုပါသရုပ်ဆောင်နှင့်ပရိတ်သတ်အကြိုက်ဆုံးဒီနှစ်အစောပိုင်းကသူကပြောသည် လက်အိတ်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ဝတ်ချင်စိတ်ရှိနိုင်သည်.
ပြီးတော့၊ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး Smith ကဒီအခွင့်အလမ်းကိုရကောင်းရလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးသတင်းများအားလုံးအတွက် iHorror သို့ညှိနှိုင်းပြီးအောက်ပါထင်မြင်ချက်များတွင်ဖရန်ချိုက်စ်ဂိမ်းစက်ထဲ၌သင်မြင်လိုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
၂၀၁၈ - Waylon Jordan ၏အကောင်းဆုံးစာအုပ်များ
စာရေးဆရာ / ဒါရိုက်တာမာရီယာ Pulera '' Between Worlds '' ဆွေးနွေးသည်